AO RAHA Gazety Malagasy Online – SEMPAMA	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: SEMPAMA	Miverena Fitokonana SEMPAMA – Mbola hiampy ireo mpampianatra ho tapaka karama Mandrangaranga indray ny fampitahorana. »Hitombo ireo mpampianatra hotapahina karama raha mbola tsy miverina miasa », araka ny fanambaràn’ ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Manoro Régis. Ireo mpampianatra mpiasam-panjakana rehetra nandefasana taratasy fiantsoana hanara-maso sy hitsara ny fanadinam-panjakana nefa tsy tonga hana- tontosa izany no ho voakasik’ io fanapahana karama io.
Tahotry ny ho tapaka karama – Miverina mandray asa tsikelikely ireo mpitokona Efa misy amin’ireo mpiasam-panjakana nanao fitokonana no niverina nandray ny asany nanomboka omaly taorian’ny fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny filankevitry ny governemanta, ny 10 jolay lasa teo. « Ny 80%-n’ireo mpampianatra miisa 266 nahazo ilay fanerena hiasa no efa niverina nampianatra any amin’ireo foibem-pitondram-pampianarana eny anivon’ny faritra (Dren) miisa 18 manerana ny Nosy », araka ny antontan’isa nomen’ny avy amin’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, taorian’ny fitetezam-paritra nataon’ireo tompon’andraikitra ao aminy tamin’ny faran’ny herinandro teo.
« Amin’ny talata kosa no tena ahitana ny isan’ireo tsy mbola nandray ny asany mihitsy. Aorian’izay vao ho fantatra izay fepetra horaisina mahakasika azy ireo », hoy ny fanazavan-dRanaivoson Olga, lehibe misahana ny mpiasa eo anivon’io minisitera io ihany.
Nahitana taratra ny fiverenana miasa izay ihany koa ny teo amin’ny sehatry ny fitsaboana. Toy ny hita tetsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) Ampefiloha, omaly. Nisokatra avokoa ny sampan-draharaha rehetra hatramin’ny fanaovana fitarafana izay isan’ny nikatona foana nandritra ny fitokonan’ny mpitsabo mpanampy. Saika noho ny tahotra amin’ny fanapahana karama avokoa no voalaza fa anton’ny niverenan’ireo mpitokona niasa.
Ireo mpitokona izay tsy manaiky ny fanerena kosa indray dia nilaza ny hametraka fitoriana.
« Zo sendikaly no ampiharinay fa tsy misy resaka hafa mihitsy. Vao mainka hihamafy ny fitakiana », hoy ny nambaran’ireo mpampianatra avy amin’ny Sempama, mbola manohy ny fitokonana.
Rakotonandrasana Valérien, mpitarika ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy aza dia milaza haka vadintany mihitsy mba hahafahany miditra ao amin’ny faritry ny Hjra. Ny tale jeneralin’ny ministeran’ny Asam-panjakana kosa nampahatsiahy tamina onjam-peo iray fa azo atao ny fitakiana sendikaly, saingy misy ny sampan-draharaha tsy maintsy manatontosa ny asany ary voafaritry ny lalàna izany.
Hetsiky ny SEMPAMA – Hojerena amin’ny herinandro ambony ny fanapahana karama Efa nivoaka ny lisitr’ireo mpampianatra 265 nahazo toromarika fa tsy maintsy mandray ny asany na ilay antsoina hoe »réquisition de service ». Nisy tamin’ireo voakasik’izany no nanaraka, saingy tsy vitsy ihany koa ireo mbola nanohy ny fitokonana omaly. Na efa nifarana tamin’io omaly io aza ny 24 ora nolazain’ny minisiteran’ny Fanabezam-pirenena tsy maintsy hanatanterahana an’io baiko io dia voalaza fa amin’ny herinandro ambony vao hojerena akaiky ny mahakasika ny sazy fanapahana ny karaman’ireo minia tsy mbola manao ny asany.
« Tsy mbola nisy aloha hatramin’izao ny mpampianatra nampiharana izay sazy izay. Mbola hatao ny fampahafantarana azy ireo, izay halefa eny anivon’ny distrika ,ka amin’ny herinandro ambony vao tena mety ho tanteraka izany », hoy ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Razafimanantsoa Jean Christophe.
Aorian’ny fangatahana fanazavana dia mety hisy ihany koa ny fiakarana amin’ny filankevi-pifehezana.
Fanabeazana – Mpampianatra mpitokona 265 teren’ny fanjakana hiasa Fepetra hentitra. Terena sy omen’ny fitondram-panjakana baiko tsy maintsy mandray ny asany ny mpampianatra mpitokona 266, tohin’ilay fanapahan-kevitra noraisina teo anivon’ny filankevitry ny governemanta ny 10 jolay teo. Io ilay antsoina hoe « réquisition de service».
Mpampianatra izay avy amin’ireo foibem-pitondram-pampianarana eny anivon’ny faritra (Dren) miisa 18 manerana ny Nosy.
Voalaza fa hanaovana peta-drindrina ao anatin’ny fotoana faran’izay haingana eny amin’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) sy ny Dren ny anaran’izy ireo. Nanambara ihany koa ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena fa handraisana fepetra hentitra ireo minia tsy manaraka ity baiko ity, ao anatin’ny 24 ora aorian’ny nampahafantarana izany amin’ny alalàn’ny onjam-peo sy ny fahitalavi-pirenena.
Manoloana an’izay anefa dia nilaza ny hanohy ny hetsika fitakian’izy ireo hatrany ireo mpampianatra eo anivon’ny Sempama.
« Zo sendikaly no nanaovanay fitakiana tamin’ny alalan’ny sendikan’ny mpanabe eto Madagasikara (Sempama) ary heverinay fa hery famoretana sy fanaovana halako bika tsy tiako tarehy sy faneriterena izao baiko izao », hoy ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra iray nisafidy ny tsy hitonona anarana. « An’alina ny mpampianatra manao fitakiana manerana ny Nosy fa tsy 200 fotsiny, ka noho izany dia ireo mpitari-tolona mihitsy no kendrena amin’ity fepetra ity», hoy indray ny mpampianatra mpitokona, iray hafa.
Fitokonan’ny SEMPAMA – Ifanotofana ny fanaovana « cours » Lasa mirona any amin’ ny fanaovana « cours » ny ankamaroan’ireo mpianatra eny amin’ny sekolim-panjakana noho ny mbola fizirizirian’ny mpampi- anatra sasany manohy ny fitokonany. Maro amin’ ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra no manahy ny amin’ny mety hizoran’ny fanadinana ofisialy hatrany na dia mbola mitokona aza ny mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana, ka izany no mampihazakazaka azy ireo manao « cours ».
« Efa nandefitra teo ny sekoly tsy miankina tamin’ ny fanemorana ny datim- panadinana ka mety tsy hilefitra intsony ny minisitra », hoy ny fanehoan-kevi-dRavaonirina Claudia, renim-pianakaviana.
Ireo mpiadina tsy miankina amin’ny sekoly sy ireo mpianatry ny sekolim-panjakana no tena roboka amin’ny fanaovana »cours » ity raha mianatra ara-dalàna kosa ny amin’ny sekoly tsy miankina.
Ny voamarika dia misy amin’ireo mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana ihany mikarama mampanao an’ireny fanampina fampianarana ireny.
Hetsiky ny SEMPAMA – Ifanotofan’ny mpanao fitakiana ny fitokonan’ny mpampianatra(1)
Mpiasam-panjakana maro avy amina sehatra hafa indray omaly no tonga nanotrona ireo mpampianatra mpanabe mivondrona ao anatin’ny sendika Sempama teny Ampefiloha. Nahitana mpampianatra mpikaroka, ny avy amin’ny banky foibe ary ny solontena avy amin’ ny sendikan’ny mpiasam- panjakana eo anivon’ireo minisitera isan-tsokajiny ( »cellule de crise interministé- rielle ») teny an-toerana.
Nomarihin’ny filoha mitarika ny sendika misy azy ireo avy anefa fa mandeha amin’ny anaran’ ny tenany manokana no nahatongavan’ireo olona nitonona ho solontena avy amina sendika isan-tsokajiny ireo.
« Malalaka amin’izay tiany haleha ny mpikambana tsirairay ao amina sendika, saingy tsy tokony hanonona ny anaran’ny sendika kosa izy. Hatreto aloha dia tsy mbola manatevin-daharana azy ireo mihitsy izahay satria samy hafa ny fitakiana », hoy Rakotondrainibe Simon Richard, filoha nasionalin’ny Seces. Toa somary nifanipaka tamin’ izay kosa anefa ny kabarin’ ny Pr Rafalimanana Alexis, mpampianatra mpikaroka izay nilaza fa « vonona ny hanohana ny mpampianatra satria zavatra mitovy no iaretana ».
Ireo avy amin’ny sendika hafa kosa dia nilaza fa ny fahatsapan’ izy ireo ny lanjan’ny fampianarana no antony iraisan’izy ireo hina amin’ny Sempama.